हाम्रो पुर्खालाई मारेर बाहुनक्षत्रीले दशै मनाउन मिल्छ भने हाम्रो समाजले बहिस्कार गर्न किन मिल्दैन ? - MONGOL KHABAR
हाम्रो पुर्खालाई मारेर बाहुनक्षत्रीले दशै मनाउन मिल्छ भने हाम्रो समाजले बहिस्कार गर्न किन मिल्दैन ?
काठमाडौ । शरणार्थीको रूपमा प्राण बचाउन भिक मागेर हाम्रो देशमा सरण मागेर हाम्रै देशमा बस्ने अनि हामीलाई नै हेप्ने वा वा वा वा तिम्रो कुबुद्धी, शोच त तिम्रो पुर्खालाई हिजो भारतबाट अलाउदिन खिल्जीले लखेटेर आउदा सायद हाम्रो पुर्खाले बास गास कपास नदिएको भए आज तिमीहरूको पुर्खाको जिवन कस्तो हुन्थ्यो होला ?
तिम्रो अत्याचारको विरुद्ध त्यसै बेला देखी हाम्रो पुर्खाले संघर्ष गर्दै आएका छन । हामी हाम्रो पुर्खा प्रति गौरब गर्छौ । तिम्रो पुर्खा देखी तिमीहरूलाई हाम्रो पुर्खा र हामिले तिमिहरु प्रती गरेको दयालाई सधै कायरताको रुपमा बुझ्न खोज्यौ । यो तिम्रो लागी घातक कुरा हो । हिजो तिम्रो पुर्खालाई हाइतीबाट खेदे, इरानबाट खेदे, भारतबाट खेदे, म्यानमार बर्मा बात खेदे, हालै केहि बर्ष अगादी मात्र भुटानबाट खेदे तर हामिले आज सम्म सद्भाव व्यक्त गर्‍यौं ।
हामीले भुलेका छैनौं गणेश पाण्डे, नारायण प्रसाद अर्याल र द्रब्य शाहा द्वारा सन 1559 मा हाम्रो पुर्खा घले राजाको टाउको कातिएको, हामिले चाहेर पनि बिर्सन सकेका छैनौं । सुपती गुरुङ,लखन थापामगर, सुपदेब गुरुङ, गंगालाल श्रेष्ठ, श्रीजंगा थेबे, रामप्रसाद राई वाइबा राजा लगायत ज्ञात अज्ञात मंगोल योद्धाहरुलाई किनकि यिनै बिर मंगोल पुर्खाहरुबाट हामिले तिम्रो दमनको विरुद्ध लद्नलाई प्रेरणा मिलेको छ ।
जुन हैसियत मुलबासी मंगोलले तिमिलाई दियो यो नसोच कि सधै नै यो हैसियत मसंग रहनेछ बरु यो सोच कि जुन हैसियत दिन सक्नेले हैसियत फिर्ता पनि लान सक्छ भनेर त्यसैले आफ्नो हैसियतमा बस त्यो तिम्रो लागी राम्रो पक्ष हो । तिम्रो पुर्खाहरुले हैसियतको ख्याल नगर्दा अपमान सहनुपरेको देखेर पनि अब तिमिले बुझ्नु पर्छ ।
बिगत देखि जबर्जस्ती लाद्न खोजेको बिजय दशै मंगोल समाजले इन्कार गर्दै आइरहेको छ र आज पनि गरिरहेको छ । यसले देश भित्र एउटा शत्रुताको दियो बलिरहेको छ । यो समस्या समाधानको विकल्प पनि खोज्ने कि ? जब सम्म अन्याय पुर्ण व्यबहार हुन्छ तब सम्म न्यायको लागी लडाइँ भइरहेको हुन्छ ।
अहिले नेपालमा मात्र नभएर बिदेशभर छरिर रहेका नेपाली मुलबासी मंगोलहरु दशै बहिस्कारको लागी परेका छन । सामाजिक संजाल फेसबुक लगायतका अन्य सामाजिक संजाल पनि दशै बहिष्कारले रंगीचंगी भएको छ । उता दशै हिन्दु आर्य बाहुनक्षेत्रीहरु साम्प्रदायिकता भत्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन यो सरासर गलत छ ।
किनभने साम्प्रदायिकता भत्काउन मंगोल समाज होइन बाहुनक्षेत्री समाज लागी परेका छन यो कुरा उनीहरुको दिमागमा पस्न आबस्यक छ । मंगोलकै दयामा बांच्ने, मंगोलकै देशमा बस्ने, मंगोलकै राज्य खोस्ने अनि मंगोल पुर्खाको हत्या गरेको दिन बिजय दशमी मनाउने र जबर्जस्ति हिजोको दिनमा मनाउन लगाउने तिमीहरुको पुर्खा होईन र ?
अनि आजको जेनेरेसनको मंगोल समाजले हामी हाम्रो पुर्खाको हत्याको दिन शोकको दिन मनाएर बहिस्कार गर्छौ भन्दा साम्प्रदायिकता हुन्छ भनेर रुवाबासी गर्ने वा वा वा वा बाहुनक्षेत्री हाम्रो पुर्खा मारेको दिन तिमीहरू खुसी हुदा हामी पनि खुसि भैदिनु पर्ने ? अनि साम्प्रदायिकता तिमीले गर्यौ कि मंगोल समाजले गर्यो ? याद गर साम्प्रदायिकता को अर्थ अब मंगोल समाजलाई पनि थाह छ । साम्प्रदायिक्ता सिकाउने कोशिस नगर ।
जुन यो बिजय दशमी नेपालीहरुको महान चाड भनेर प्रचार गरिएको छ यो तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ किनकि यो हिन्दु आर्य बाहुनक्षेत्रीको मात्र हो । मुस्लिम, इसाई बाहुनक्षेत्रीको पनि होइन उनिहरु पनि दशै मान्दैन्न र मंगोल समाजको पनि होइन यो हिन्दूवादीहरुको भनेर प्रचार गर्ने गर त्यसैमा भलाई छ ।
जुन अरु धर्मावलम्बीको तुलनामा हिन्दु आर्य बाहुनक्षेत्रीको बिदा धेरै हुन्छ यो गलत छ । तुरुन्त अब सबै धर्मावलम्बीलाई समान बिदा लागु गर्नु पर्छ नत्र यसले भबिस्यमा ठुलो समस्या निम्ताइनेछ । बिश्व मानवाधिकारको मुनि बसेर सबै आफ्नो अधिकार प्रयोग गरौ यसैमा सबैको भलाइ छ ।
लेखक- बर्नवास दि जोङ बाङ (नर ब दर्लामी मगर)